OEM / ODM - Guangzhou Yun Yang Izimonyo Co., Ltd.
Asidi i-hyaluronic Series
Anti-ukuguga & Imibimbi
Amachashaza Dark & ​​onokuqundeka
Dark Imibuthano & Puffiness
Lifting & firming & izinqubo okumelwe & Massage
Ububomvu & Ukuzwela
Induna & Oil Control
ikhule ezimbotsheni Ibonakala
Eye & Lip ukunakekelwa
Hand & umzimba ukunakekelwa
Inqubo: Private Label
Ukukhetha umkhiqizo wakho
Ukukhetha imikhiqizo skincare umugqa wakho kungaba inqubo iyisikhukhula, kepha yokuthengisa onolwazi ehlotshaniswa kuthiwa ngobuchwepheshe uqeqeshelwe ukukuqondisa ngenqubo kalula. Bafundiswa ukubuza imibuzo efanele, ukuvumela ukwakha okukhethiwe umkhiqizo wakho kwamandla kanye ngobuchwepheshe; ngenkathi ngamabomu nezidingo clientele.You yakho lizobuyekeza line yethu yonke ukwakhiwa eziphambili, ngokukhetha imikhiqizo yakho futhi wayala amasampula lapho kudingeke khona ukuze avivinye imikhiqizo yakho phambi Ukukhetha. Futhi, ayikho into ukukhokhiswa umkhiqizo wakho ngokubonisana.
Ukukhetha Impahla yakho
Uma okukhethile umkhiqizo wakho aye akhethwa, i-akhawunti yakho esiphezulu azokukhombisa yethu ukukhetha emaphaketheni. ngenkathi kungaba onzima, sizokwenza kube lula ngawe. Ngemva imibuzo ambalwa ayinhloko ethile mayelana nombono wakho futhi isabelomali, yokuthengisa yakho umhlobo kuzokusiza ukhethe ibanga ongakhetha womkhiqizo ukwakha ebumbene, ku-brand ukubukeka.
Ukusungula Imininingwane Yakho Brand
Manje imikhiqizo yakho ilebula eyimfihlo skincare akhethiwe kanye emaphaketheni yakho iye ekhethiwe, izoya ku ekuxoxeni umkhiqizo wakho. Kubalulekile ukuthi uqonde UBANI uthengisa ukuba, kanye UBANI wena njengoba inkampani, ukudala ukubukeka siyohlala njalo ezingqondweni wena kanye namakhasimende akho.
Ukwakhela Impahla yakho
Uma yokubeka uphawu yakho usumisiwe, futhi imikhiqizo yakho kanye nokupakisha abakhethiwe, sizokwenza udlulela ukuklama emaphaketheni zakho. Ngezinye YunYang Muhle, lokhu kungaphezu unezela i-logo ilebula lutho, lena inqubo design ukuhumusha BRAND yakho ungene imikhiqizo yakho skincare.
Umklamo Ithimba lethu ngeke ukuklama omunye izinguqulo amalebula akho ngawe ngekhompyutha ubuyekeze futhi unikeze impendulo. Inqubo yethu zokudala kulayini kokubili ngempumelelo nakahle, ukuqinisekisa wena esheshayo nesikhathi kungenzeka.
Ukuthengisa & Ukuthengisa Umkhiqizo wakho
ukwesekwa kwethu akugcini nje ngoba ozitholile entsha ilebula eyimfihlo skincare umugqa wakho. Ithimba lethu leticeceshiwe abafundile uzoqhubeka ukukunikeza ukwaziswa nesiqondiso udinga ukumaketha ngempumelelo futhi adayise imikhiqizo yakho. Kusukela isithako yethu egciniwe ye-intanethi, zethu-abasebenzi skincare ochwepheshe, sizokwenza ukukunikeza ulwazi oludingayo ukuze uphumelele emakethe skincare.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe Ilebula Private nokuthi ukuze uqalise, xhumana nathi futhi omele-akhawunti yakho entsha bayokujabulela ukukusiza.
YunYang Muhle uyohlale ukukunikeza eziphambili, wezokwelapha grade imikhiqizo skincare for ilebula eyimfihlo. Ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-15 i-professional skincare umkhakha, imikhiqizo yethu ziye zashintsha aphume kweminyaka yocwaningo, ukuhlolwa kanye impendulo.
Phakathi nazo zonke lezi Emashumini amabili eminyaka adlule, sesiqedile ukuthi ingxenye ebaluleke kakhulu eyimfihlo inqubo lebula ukuqinisekisa ukuthi siyaqonda wena, umkhiqizo wakho, futhi imigomo yakho - ngokuyisisekelo, umbono wakho. Yingakho yokuthengisa ochwepheshe bethu abaqeqeshwe kakhulu ukusebenza nawe ukukuqondisa yangasese inqubo ilebula; ukubuza imibuzo efanele ukusiza sokucaba ephelele umkhiqizo ilindelwe amakhasimende wakho.
Ngezinye YunYang Muhle, ukugxila kwethu impumelelo skincare umugqa wakho, futhi sizibophezele esingeqile okulindele zonke lezi zigaba.
Quick Mkhiqizo Vula Duzane Times
Unolwazi Skincare Ochwepheshe
Ngo-indlu Graphic Designer Team
Professional emaphaketheni izincomo
Mahhala Umkhiqizo Ulwazi & Training
No. 18, West Street, Okwesine Economic Cooperative, uDali Village, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou
Imikhiqizo Guide - Imikhiqizo ezifakiwe- Tags Zezıhlabane - Sitemap.xml - AMP Ucingo
Matcha Mud imaski , Ishidi imaski , ebusweni imaski Ishidi , mhlophe imaski ebusweni , imaski ebusweni , Face imaski Ishidi ,